Senior IT Assistant | PRO 1 Myanmar Co., Ltd. ﻿
15.10.2020, Full time , Trading
Company: PRO 1 Myanmar Co., Ltd.
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have establishedareputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည် ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ်ထပ် မံတိုးချဲဖွင့် လှစ်လိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး နှင့် အကြီးဆုံး 'One Stop Home Center' ဖြစ်ပါသည်။Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar. Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!
o	Server စနစ်၊ Database နှင့် Software ပိုင်းတို့တွင် အမြဲစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း။
o	Software၊ Database၊ Severပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။
o	Softwareတစ်ခုပြီးမြောက်ရန် Planချခြင်း၊ user requirement ကောက်ခြင်း၊ လိုအပ်သည်များအား Suggestionပေးခြင်း၊ programmer အား userတောင်းဆိုသည်များကို ရှင်းလင်းပြခြင်း၊ Develop မလုပ်မီ testing စမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Completeဖြစ်ပါက Launch လုပ်၍ Software စတင်အသုံးပြုခြင်းနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
o	Database tools များအသုံးပြု၍ Softwareအသုံးပြုသူuserများ၏ dataအသွားအလာtransaction များအား အချိန်မပြတ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားသော Dataများအား လွယ်ကူစွာကြည့်ရှူနိုင်ရန် Report များပြုလုပ်ပေးခြင်း။
o	Software and Procedure စမ်းသပ်အောင်မြင်သွားသော ဆော့ဝဲလ်များကို userများ အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအားပြသပေးခြင်း။
o	User ၏ လိုအပ်ချက်များ (သို့) အသစ်ထပ်တိုးလိုက်သည့် Feature များအား Update ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း။
o	Company အတွက် ထပ်မံအသုံးပြုရန်လိုအပ်သော Software များအား ကိုင်တွယ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Department များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
o	ဝန်ထမ်းများ ( Software ) အသုံးပြုသူများအား ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ Online မှဖြစ်စေ Supporting ပေးခြင်း။
o	Software Project တခုလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ထပ်တိုး Branch အသစ်များအတွက် လိုအပ်သည်များကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်း။
o	POS (Point of Sale) ၊ ERP (Enterprise Resource Planning) နှင့် အခြား ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ Software များအား ကိုင်တွယ်ခြင်း။
o	လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍တင်ပြရန်လိုအပ်လာသော ကိစ္စရပ်များအား Management Team နှင့် ညိုနှိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။
Work location အမှတ်(၇၆)အာလိန်ငါးဆင့်ဘုရားအနီး၊၀ပ်ရှော့မှတ်တိုင်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
• တက်ကြွဖြတ်လတ်ပြီး အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း (Wholesales)အရောင်းပိုင်းအားကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင် စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Thai Translator M (3)
• သွက်လက်ချက်ချာပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရမည်။ • အရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ • နယ်ဆိုင်ခွဲများတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
585 Days, Full time , Trading
•	တစ်ခါတစ်ရံလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရOTဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းရမည်။
•	ရေရှည် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်ရမည်။ •	လူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ရမည်။
•	Designing and developing applications for the iOS platform •	Collaborate with cross-functional teams to define, design, and launch new features •	Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability •	Bug fixing and improving application performance •	Work with outside data sources and APIs •	Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency •	Apply your CV to hrho@pro1homecenter.com.mm with your work experience and expected salary.
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိရမည်။ For Zin Htet Cement & Building Materials
•	သွက်လက်ချက်ချာပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရမည်။
•	Can handle the responsibilities under pressure
•	Should have good interpersonal skills and be able to communicate well with all levels of staff. •	Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees. •	Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results •	Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions.
•	Designing and developing applications for the Android platform •	Collaborate with cross-functional teams to define, design, and launch new features •	Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability •	Bug fixing and improving application performance •	Work with outside data sources and APIs •	Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency
o	Server စနစ်၊ Database နှင့် Software ပိုင်းတို့တွင် အမြဲစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း။ o	Software၊ Database၊ Severပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။ o	Softwareတစ်ခုပြီးမြောက်ရန် Plan� ...
•	အချိန်ပိုဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Senior IT Assistant IT/Computing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon PRO1 Home Center IT/Computing Jobs IT/Computing Jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon